‘घर’ले नेपालमा हरर बेन्चमार्क सेट गर्छ : अर्पण थापासँग संवाद
सुशिल श्रेष्ठ स्टारर ‘लभ डायरिज’ ट्रेलर लन्च
अस्कर मनोनयन घोषणा : ‘जोकर’ सर्वाधिक ११ विधामा छानियो
यस्तो छ मीन भामको ‘चिसो वर्ष’ तयारी, २०२२ मा छायांकन सकिने
‘सेल्फी किङ’ ट्रेलर : सेलेव्रिटी, स्टारडम र मान्छेको मूल्य
नेफ्टा फिल्म अवार्ड काठमाडौंमा, भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउने
‘परदेशी २’ मा प्रकाश सपुत, दशैंमा रिलिज घोषणा
१२ फिल्मद्धारा रिलिज मिति निश्चित : क्यालेन्डर
टाइम म्यागजिनका उत्कृष्ट १० फिल्म
नेपाली मौलिक सिनेमाको आधार : नवीन सुब्बा
21st January 20200सुशिल श्रेष्ठ स्टारर ‘लभ डायरिज’ ट्रेलर लन्च
13th January 20200अस्कर मनोनयन घोषणा : ‘जोकर’ सर्वाधिक ११ विधामा छानियो
8th January 20200यस्तो छ मीन भामको ‘चिसो वर्ष’ तयारी, २०२२ मा छायांकन सकिने
By soniya on	 10th July 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
साउन ३ गते नेपाल रिलिज हुँदैछ ‘घर’ । हरर जनरको यो फिल्मले ट्रेलरदेखि हाइप बटुलेको छ । यही मेसोमा निर्देशक अर्पण थापाले मूभिमान्डुसँग भलाकुसारी गरेका छन् । उनी निर्देशक, पटकथा लेखक र अभिनेता एकसाथ छन् फिल्मभित्र । नेपालमा हरर जनरको विकास, मनोविज्ञान, घर र दर्शकीय सोचबारे कुरा गरिएको छ :
नेपालमा हरर जनरको विकास कस्तो देख्नुभएको छ ? नेपाली दर्शकको स्वाद यसप्रति कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपालमा हरर जनरको दर्शक छन् भन्ने कुरा त मैले अगाडि बनाएको सुनकेशरीले प्रमाणित गरेको छ । यो जनरको खोजी र विकास विगतमा त्यति नभएको हो । यदि राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने हो भने दर्शक चाहिँ छन् । हन्टेड पर्सपेक्टिभमा गयो भने नेपाली दर्शकले जोम्बइज फिल्मभन्दा बढी रुचाउँछन् ।
यसअघि नेपाली हरर फिल्म निर्माणमा कहाँनेर गल्ती भए ? तपाईंले ती गल्ती सच्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ कि छैन ?
पहिले हाम्रो हरर फिल्म कथा लक्षित हुन्थे । एउटा भूत हुन्थ्यो जुन मरेको हुन्थ्यो । यसलाई एउटा स्टोरीमा भनिथ्यो । अहिलेको पुस्ताले स्टोरीभन्दा प्यारानर्मल एक्टिभिटी (अस्वभाविक गतिविधि)मा बढी विश्वास गर्न थालेका छन् । घरमा भूत नदेखिँदा हुने कार्यक्रम, या भूत देखिँदा हुने कुराहरु, मिथका कुराहरु यी सबै छन् । हररलाई कथाभन्दा इभेन्ट उन्मुख बनाउँदा दर्शकले रुचाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई ।
भूतदेखि तर्सिने नेपाली समाजको त्रासको मनोविज्ञानले तपाईंलाई घर फिल्म बनाउन कति सहयोग पुर्‍यायो ?
एकदिनमा न्यूनतम २ वा ३ वटा हरर फिल्मको ट्रेलर रिलिज हुन्छ । नेपालमात्र हैन संसारभर हररको आफ्नै आकर्षण छ । हरर भनेकै फिक्सन हो । यदि मैले भगवानमाथि आस्था राख्छु भने डेभिलमाथि विश्वास भएको कुरा मात्रै हो । मिथ पनि काल्पनिक सोच हो । अहिले बन्ने हरर फिल्म पनि यिनै कुरामा आधारित हुन्छन् । जहिलेसम्म भगवानमाथि आस्था राख्छौं, त्यतिबेला सम्म यस कुरामा विश्वास भैराख्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
फिल्मभित्र तपाईं निर्देशक, अभिनेता र लेखक समेत हुनुहुन्छ । यी तीन भूमिकालाई कसरी सन्तुलन मिलाउनुभयो ?
यसपटक मलाई सजिलो के भैदियो भने, जुन पात्र चित्रण मैले गरेको छु, त्यो धेरै बेरसम्म रहँदैन । यही कारणले गर्दा त्यसमा धेरै समस्या आएन । पटकथा र निर्देशनको काम सँगै अगाडि बढ्छन् । म यस कुरामा मानसिकरुपमै तयारी हालतमा थिएँ ।
नेपालमा हरर जनरको सम्भाव्यता र व्यवसायिक मूल्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
नेपाली दर्शक हरर फिल्म रुचाउँछ भन्ने कुरा विदेशी फिल्म लाग्दादेखि नै थाहा भएको कुरा हो । नेपालमा ‘कन्जुरिङ’, ‘एनाबेल’ सुपरहिट भए । धेरै विदेशी फिल्म छन् जसले राम्रै कमाइ गरेका छन् । सबै हिसाबले हेर्ने हो भने त्यही दर्शक त हुन् । सुनकेशरीकै पहिलो तीन दिनमा राम्रै ओपनिङ भएको हो । यसले गर्दा दर्शक त छँदै छन् नि ।
मनोवैज्ञानिक थ्रीलर र हरर जनरप्रति तपाईंको अभिरुचि किन ?
अहिले चलेको ‘कविर सिंह’देखि लिएर जमानामा चलेको अमिताभ बच्चनको ‘दिवार’सम्म हेर्नूस । अब समय बदलियो । पहिले हिरो भन्ने वित्तिकै मीठो बोल्नुपर्छ र राम्रो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिलेका हिरो रियालिटीसँग आधारित हुनुपर्छ । यो भनेको डार्क मोमेन्ट पनि हो । नराम्रो पनि हुन्छ । सबै कुराको मिश्रण पनि हो । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ : ‘ह्वेन भिलेन स्टार्ट्स टु मेक अ सेन्स, देयर इज नो हिरो’ । यही भैराखेको छ अहिले । भिलेनले सेन्स स्टार्ट गर्दैछन् ।
घरले नेपाली हरर जनरको अभ्यासलाई कुन उचाइमा लिएर जाला ?
निर्देशकको रुपमा म भन्न चाहन्छु : यदि कसैले हरर बनाउँछ भने उसको लागि मैले बेन्चमार्क सेट गरिदिएको छु । त्यो भन्दा मुनि चाहिँ हुनुहँुदैन, त्यो भन्दा माथि हुनुपर्छ । यो फिल्म त ‘कन्जुरिङ’ जस्तो थिएन यार भन्नुभन्दा यो फिल्म त ‘घर’जस्तो थिएन यार भन्न सक्छ ।